Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada ONLF oo War Saxaafadeed Kasoo Saartay Dilkii Kooxda Al-Shabaab Ku Dishay Labo Masuul oo Kamid Ah ONLF.
Jabhada ONLF oo War Saxaafadeed Kasoo Saartay Dilkii Kooxda Al-Shabaab Ku Dishay Labo Masuul oo Kamid Ah ONLF.
Waxay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO/ONLF) si adag u cambaaraynaysaa dilkii foosha xumaa eey kooxda Al-Shabaab u gaysatay labo Masuul oo kamid ah ONLF, Naftiihure Cabdicasiis Muxumad Daahir, oo kamid ahaa Golaha Dhexe ee ONLF iyo Naftihure Maki Cumar Cabdi oo ahaa Masuulka Agoonta.
Labadan Masuul ayaa kasoo kicitimay magaalada Baydhabo ee dalka Somalia, waxayna kusii jeedeen wadanka Ogadenya, 08/05/2015. Dadaalo badan oo lasameeyay kadib waxaa lasoo xaqiijiyay in labadan masuul laga afduubay meel udhaw magaalada Baydhaba.
Baadhitaan badan oo mudo dheer qaatay kadib waxay Waaxda Sirdoonka ee ONLF soo xaqiijisay in kooxda Al-Shabaab u afduubeen Masuuliintan meesha lagu magacaabo Yaaq Badhiwayn, kadib markay xaqiijiyeen ineey masuuliintan kamid yihiin ONLF. Masuulka kooxda Al-Shabaab u qaabilsan deegaankaas oo lagu magacaabo Isaaq Dhuxuloow ayaa amray dilka masuuliintan 10/05/2015.
Ma aha markii ugu horaysay eey falkan oo kale kooxda Al-Shabaab kula kacaan masuuliinta ONLF. Waxay hada kahor dileen sideed masuul oo ONLF ahaa, kuwaasoo uu kamid ahaa Hogaankii Hore ee Gaashaandhiga ONLF Naftiihure Ilyaas Sheekh Cali.
Waxay ONLF si adag u cambaaraynaysaa falkaas fulaynimada iyo waxshinimada leh ee kooxda Al-Shabaab ay ku dhaqaaqday. Sida la ogsoonyahay, ONLF qayb kama aha colaada sokeeye ee wadanka Somaliya ka socota, garabyada ku looltamayana dhincna kama noqonin. Qaar kamid ah Hogaamiye Kooxeedyada iyo Masuuliinta Musuqa iyo Maamul xumida ku caan baxay ee Maamul Goboleyeedka Somaliya ayaa caadaystay ka ganacsiga Qaxootiga iyo Xubnaha ONLF, iyagoo ku raali galinaya Gumaysiga Itoobiya, taasoo dil, jidh dil iyo xabsi dheer ay la kulmayaan.
Sikastaba ha ahaatee, Al-Shabaab waa kooxda kaliya ee kula kacda dilka xubnaha ONLF ee gacantooda soogala, marka laga reebo sheegashada ay sheegtaan ineey Gumaysiga Itoobiya ladagaalamayaan, waxaa jira cadaymo badan oo muujinaya xidhiidhka iyo iskaashiga sirdoon ee ka dhexeeya Gumaysiga Itoobiya iyo xubno muhiim ah oo katirsan kooxda Al-Shabaab.